Hilton 1, Hyatt 2, Marriott chete mashanu mukupona bhizinesi reCOVID
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Hilton 1, Hyatt 2, Marriott chete mashanu mukupona bhizinesi reCOVID
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Maketani makuru ehotera akararama sei iyo COVID-19 kudonha, kana zvasvika pakuchengeta kukosha uye mitengo yemasheya. Chikamu chehotera chakanyatsomira pamusoro pegore rapfuura, mhedzisiro yacho inoratidzirwa neiyo yakapinza brand value kuderera kweanenge ese epamusoro makumi mashanu emhando dzakakosha dzemahotera.
Hwerengedzo yehuwandu hwepamusoro-soro hwe50 mabhurani epahotera akakosha ne33% (US $ 22.8 bhiriyoni) sezvo chikamu chinotaurirana kudonha kubva ku COVID-19 dambudziko.
Hilton anochengeta zita remhando yepamusoro yepasirese yehotera, kunyangwe achinyora 30% yemutengo wakaderera kusvika paUS $ 7.6 bhiriyoni.
Hyatt ndiyo mhando inokurumidza kukura mu pamusoro gumi uye imwe chete yemhando mbiri chete yekurekodha mhando yemhando yekukura mune yepamusoro 10, kumusoro 50%.
Chikamu chehotera chakasimba. Sezvo nyika inotanga kuvhurika ichidzoka zvakare, isu tave kutopupurira kusimudzira kwakasimba mukubhuka uye nhanho dzekugara mukati mebhodhi, kuratidza kusimba kwema brand kunyangwe nyonganiso yegore rapfuura.
Hilton kamwezve ndiyo inonyanya kukosha hotera mhando, kunyangwe ichinyora 30% kudonha mu brand kukosha kusvika US $ 7.6 bhiriyoni. Nepo mari yaHilton yatora chakakomba kubva pakatanga denda, mucherechedzo urikutaridza kuvimba nehurongwa hwekukura, uchizivisa mamwe makamuri 17,400 mupombi yayo, zvichiunza huwandu hwacho kumakamuri matsva anopfuura mazana mana ezviuru akarongwa - kusimudzira kwe400,000% pa gore rapfuura. Hilton zvakare inodadisa yakakoshesesa hotera portfolio, ine ayo manomwe mabhenji ayo anowanikwa mune chinzvimbo anosvika akazara ezvekukosha kukosha kweUS $ 8 bhiriyoni.
Marriott (pasi 60% kusvika US $ 2.4 bhiriyoni), yadonhera pasi kusvika pa5th nzvimbo kubva ku2nd, Mushure mekurasikirwa inopfuura hafu yeiyo brand kukosha kwayo. Gore rakapera, mari yemuchina wepasirese inowanikwa mukamuri yaive pasi pe60% kubva ku2019 uye kugara kwepasi rose kwaingova 36% yegore.
Hyatt cheki kuita 2nd nzvimbo seimwe chete yemhando mbiri dziri muchinzvimbo chekunyora rekodhi kukosha kukura ndiHyatt (kumusoro 4% kusvika US $ 4.7 bhiriyoni). Kunyangwe hosha ichikanganisa mashandiro ayo zvakanyanya, kukura kwemakamuri eHyatt kwave kwakasimba, kuvhura 72 mahotera uye kupinda 27 misika mitsva. Zvakare, iyo mhando yaenderera mberi nekusaina nyowani kuchengetedza pombi yayo, inomiririra pamusoro pe40% kukura kwemakamuri ehotera aripo mune ramangwana.
Taj ndiyo yakasimba chikamu
Kunze kwekuyera huwandu hwehuwandu hwebrandisi, Brand Finance inoongororawo simba rehukama remakemikari, zvichibva pazvinhu zvakaita sekushambadzira mari, kuziva vatengi, kugutsikana kwevashandi, uye mukurumbira wekambani. Zvinoenderana nemaitiro aya, Taj (brand value US $ 296 mamirioni) ndiyo yakasimba kwazvo hotera hotera, iine Brand Strength Index (BSI) mamakisi 89.3 kubva zana uye inoenderana neAAA brand simba ratidziro.
Inozivikanwa neayo epasirose-kasitoma sevhisi sevhisi, yakasarudzika hotera cheni mamakisi zvakanyanya mushe muGlobal Brand Equity Monitor yekutarisisa, kujairirana, kurudziro, uye mukurumbira kunyanya pamusika wayo wepamusha weIndia.
Kuita kwaTaj kwakabudirira kwehurongwa hwayo hwemakore mashanu - iyo inotarisana nekutengesa zvinhu zvisiri-zvepakati, kuita shoma muridzi kutungamirwa uye kudzikisira kutsamira pane yakasarudzika nzvimbo - ichiteverwa nekumhanyisa kumhanyisa kwayo itsva RESET 5 zano, iyo inopa shanduko sisitimu yekubatsira chiratidzo chakakunda kunetsekana kwedenda, chakakonzera kudzokazve muchiratidzo munzvimbo yekutanga panguva kubva 2020 muna 2016th banga.
Pasinei booking.com kurekodha 19% brand kukosha kurasikirwa kusvika US $ 8.3 bhiriyoni, zvaitika Airbnb (pasi 67% kusvika US $ 3.4 bhiriyoni) uye Trip.com Boka (pasi 38% kusvika US $ 3.5 bhiriyoni) kuve yakakosha yekutandara & yekushambadzira brand munyika. Chiratidzo chinodonha nekukurumidza gore rino, Airbnb, chakacheka chikamu chechina chevashandi vayo gore rapfuura, uye chakamanikidzwa kudzora pamatanho matsva avakaita mupayipi, kusanganisira nzvimbo dzekutandarira nendege.
Valley Valley (pasi 37% kusvika US $ 1.2 bhiriyoni) ndicho chakasimba chikamu chechikamu, iine BSI mamaki e84.1 kubva pa100 uye inoenderana AAA- brand simba chiyero.
Vatatu vatsva vanopinda munzvimbo
Kune vatatu vatsva vanopinda munzvimbo iyi gore rino, AMC Theatre (mutengo unokosha US $ 1.8 bhiriyoni) muna 7th, Priceline (mutengo unokosha US $ 1.5 bhiriyoni) muna 8th, uye Shenzhen Kunze Kwenyika Chinese Town (mutengo wakakosha kuUS $ 1.3 bhiriyoni) muna 9th.
Ketani hombe yepasi rose yemabhaisikopo, AMC, yatambura sezvo mabhaisikopo akavharwa pakati pekukiyiwa kwepasirese. Mucherechedzo uchave uchitarisira kuti hupfumi hwavo huchadzoka sezvo vatengi zvishoma nezvishoma vatanga kudzokera kugirazi hombe uye blockbusters ayo anonoka anozoburitswa.
Vatatu vatsva vakapinda vakaburitsa kunze kwemhando nhatu dzezvikepe, izvo zvakasiya chinzvimbo gore rino: Royal Caribbean International, Norwegian Cruise, uye Carnival Cruise Lines.
Mahotera ese anga aramba achichinjika mukupa Hotel Elite Bhenefiti kunhengo.
Source: Brand Mari Zororo & Tourism 10 2021